Ramos Oo Shaaciyay Cida Go’aamisay In Keydka Lagu Soo Bilaabo Gareth Bale Kulankii PSG %
Kabtanka kooxda kubada cagta Real Madrid, wiilka lagu magacaabo Sergio Ramos, ayaa wuxuu si kal iyo laab ah uu u amaanay mcalin Zidane, kadib guushii weyneed oo ay xalay ka gaareen kooxda kubada cagta PSG.
Guushaan ayaa waxay ka saaciday Real Madrid, inay usoo gudubto wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, waxaana labada lugood ay kusoo awood roonaatay Madrid, wadar ahaan 5-2.
Ciyaartii xalay ee PSG, ayaa waxaa keydka kusoo wada bilowday ciyaartoyda kala ah: Isco, Gareth Bale, Toni Kroos iyo Luka Modric, waxaana Ramos, uu ku amaanay macalinkaas go’aankaas uuqaatay.
“Zidane, waa midka qaatay go’aankaas,” ayuu yiri Ramos – Isagoona sii daba dhigay: “Maalin un mid ayaa nala joogi doona, maalin mid kale ayaa maqnaan doono [Zidane] waa uu yaqaanaa waxa kulanka u fiican.
“Qorshihiisa kulanka wuxuu ahaa mid wanaagsan, wuxuuna noosoo diyaariyay si wanaagsan, waxaan ku cadaadinayay faa’idadeena, si fiicana ayaana usoo gaba gabayno,” ayuu hadalkiisa kusii darat Ramos
“Weerarkeena wuxuu ahaa mid fiican, oo nasiib badan leh,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Sergio Ramos, kaasoo daafaca dhexe uga dheela Boqorada horyaalka La Liga ee Real Madrid una dhashay Spain.
Champions LeagueGareth BalePSG vs Real MadridRamos
Maalqabeenada AC Milan ayaa lasheegayaa in ay beecinayaan Qayb ka mid ah sheerka